Farmaajo: Dhallinyarada Soomaaliyeed waxa ay udub dhexaad u yihiin horumarka iyo dib-u-curashada dawladnimada dalka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaFarmaajo: Dhallinyarada Soomaaliyeed waxa ay udub dhexaad u yihiin horumarka iyo dib-u-curashada dawladnimada dalka
August 12, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Madaxweyne Farmaajo oo ururada dhallinyarada ee magaalada Muqdisho kulan kula yeeshay madaxtooyada, August 12, 2018. [Xigashada Sawirka: Villa Somalia]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in dhallinyarada Soomaaliyeed ay laf-dhabar u yihiin horumarka iyo hor-u-socodka dalka, dawladdiisuna ay diyaar u tahay in ay si dhaw ula shaqayso, fursadna ay u siiso dhallinyarada in ay qayb weyn ka qaataan dib u dhiska dalka.
“Dhallinyarada Soomaaliyeed waxa ay udub dhexaad u yihiin horumarka iyo dib u curashada dawladnimadeenna, waxaan ugu baaqayaa in ay muruqooda iyo maskaxdooda si mutaddawacnimo ah ugu adeegaan dalka.” Ayuu yiri Madaxweynuhu.
Madaxweyne Farmaajo hadalkan ka sheegay kulan xog isweydaarsi ah oo uu Madaxtooyada kula yeeshay xubno ka tirsan ururrada dhallinyarada ee magaalada Muqdisho.
Farmaajo waxa uu dhallinyarada uga warbixiyey xaaladda dalka, gaar ahaan siyaasadda, amniga, dhisidda iyo xoojinta hay’adaha dawladda, kobcinta dhaqaalaha iyo qorsheyaasha lagula dagaallamayo musuqmaasuqa.
“Dhallinyaro, waxa la idinka rabaa in aad dawladda gacan ku siisaan dadaallada lagaga hortagayo argagaxisada iyo kooxaha nabad-diidka ah ee sida joogtada ah u gumaada haldoorka dhallinyarada iyo shacabka Soomaaliyeed.”
Kulanka ayaa yimid iyada oo maanta oo bishu tahay 12 Agoosto caalamka laga xusayo maalinta dhallinyarada Adduunka.
July 9, 2018 Farmaajo oo gaaray Turkiga si uu uga qeybgalo caleemo-saarka Erdogan
Ciidamada AMISOM iyo kuwa Dowladda Soomaaliya oo howlgalo wadajir ah oo ka dhan ah Al-Shabaab ka sameeyay koonfurta Soomaaliya
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wiil uu dhalay hoggaamiyaha maleeshiyada Al-Shabaab ayaa lagu dilay gobolka Shabeellaha Hoose, sida ay ku warantay idaacada ciidamadda. Idaacadda ciidamada Soomaaliya oo soo xiganaysa saraakiil katirsan ciidanka ayaa maanta oo Isniin ah tebisay [...]